Ankadimbahoaka, Ampasanimalo… : Mirongatra ny fanendahana anaty fiara -
AccueilSongandinaAnkadimbahoaka, Ampasanimalo… : Mirongatra ny fanendahana anaty fiara
Ankadimbahoaka, Ampasanimalo… : Mirongatra ny fanendahana anaty fiara
Mirongatra tsy misy toa izany ny asa fanendahana sy ny harom-paosy tato ho ato, indrindra ao anaty fiara. Ireo olona anaty fiara avokoa no tena lasibatra amin’izany, ary ao anatin’ireny fitohanan’ny fiara ireny no tena hanararaotan’ny mpanao asa ratsy izany. Misy mihitsy aza no efa manana tambazotra mizarazara any anatin’ireny fiara mpitatitra ireny. Hita ihany anefa ny tsy fandraisana andraikitra ataon’ny mpitandro filaminana mahakasika azy ireny, ka mahatonga ny mpandeha manatanteraka ny fitsaram-bahoaka fa tsy manolotra azy ireny amin’ny polisy intsony. Efa maro araka izany ireo jiolahy ireo no nosavoritahan’ny mpandeha amin’izany resaka fanendahana olona anaty fiara izany fa mbola misy mahasahy manohy izany ihany eny na ireo vao avy nivoaka ny fonja aza.
Toa ny trangana fanendahana iray tamin’ny volana desambra teo dia noheverina fa noho ny fety manakaiky no mampirongatra izany. Lehilahy iray avy nanendaka teny Anosizato ity farany no nanohy izany teny Anosy, fantatra tamin’izany fa vehivavy iray hiakatra anaty “bus” no nendahina tamin’io maraina io. Naratra mafy vokatry ny daroka nahazo azy moa ity farany rehefa nifanenjehan’ny vatan-dehilahy teny an-toerana, ka izy efa raparapa sy nivonto tarehy iny ihany no mbola tratran’ny mpandeha nanohy izany asa ratsiny izany teny Anosy. Ny mahagaga anefa dia ny fahasahian’ireo manao izany asa ratsy izany amin’ny andro antoandro, misy mihitsy aza ny mitondra zava-maranitra entina hanimbana ny poketra na ny paosin’ireo olona mpandeha ao anaty fiara mpitatitra sendra azy ireo. Ohatra amin’izany ny tetsy Ampasanimalo izay nahatratrarana lehilahy iray tao anaty fiara mpitatitra ihany. Efa voatataka tamin’ny zava-maranitra toa ny” lame” ny paosin’ny ramatoa iray teo akaikiny no hitan’ny mpandeha, ka notanana tao anaty fiara tsy navela nivoaka intsony mandra-piandry ny polisy. Misy amin’izany ihany koa no fantatra fa manana zavatra mitovy toa ny satroka sy mody tsy mifanakaiky rehefa miditra anaty fiar,a ary tsy mety hifindra toerana mihitsy.
Anisan’izany tranga fanendahana anaty fiara izany ihany koa ity teny Ankadimbahoaka omaly maraina ity, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany tany ho any no nitrangan’ny fanendahana, ary lehilahy iray handeha hamonjy asa niandry fiara mpitatitra teny an-toerana no lasibatry ny mpanendaka tamin’izany. Araka ny fampitam-baovao dia roalahy izy ireo teny am-piandohana izay miandriandry toa ny olon-tsotra mpiandry fiara rehetra ihany koa, ka tsy nisy mahatsikaritra mihitsy satria ny fitafiny rahateo koa madio toa ny olona rehetra. Rehefa samy nifampisisika hiakatra ny fiara iny izy no nohararaotin’ny iray tamin’ireo mpangarom-paosy nosakaina ny paosin’ity tovolahy ity, ka lasany tamin’izany ny finday avo lenta iray teny aminy. Tratra tao ihany moa araka izany ny tanan’ilay mpangarom-paosy ka noraisim-potsiny teo izy, ilay finday kosa dia efa nampitainy tany amin’ilay namany niaraka nanao ny asa ratsy taminy nandositra. Niteraka savorovoro tao anatin’ilay fiara fitaterana araka izany ny momba io tovolahy io, ka saika niharan’ny fitsaram-bahoaka mihitsy izy rehefa nifampitazoman’ny mpandeha. Tonga ara-potoana ny zandary avy ao Betongolo, ka nentina avy hatrany niatrika ny fanadihadiana izy taorian’izay.